N-GUN JA WA: မြန်မာနိုင်ငံ နဲ. Multiculturalism
November 22, 2011
မြန်မာနိုင်ငံ နဲ. Multiculturalism
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များများမှာ multiculturalism, multicultural education တို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာနေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတာ လက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပဲ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကို ယနေ့ထိတိုင် ခံစားနေဆဲပါပဲ။ သူတို့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးတမျိုး ယဉ်ကျေးမှုတခုတည်းရှိပါတယ်လို့ လက်ခံခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယားလိုနိုင်ငံတွေ ကတောင် ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာတဲ့ လူမျိုးခြားတွေကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလာကာ ကျောင်းသင်ရိုးညွန်းတန်း တွေကအစ မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံအားပေးတဲ့ အစီစဉ်တွေ စနေကြပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ ဒီမြေမှာမွေး ဒီမြေမှာကြီးလာရုံမက နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများရဲ့ အခွင့်အရေး၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖော်ထုတ်ခွင့်တွေ၊ စာပေတွေကို ဦးနေဝင်း လက်ထက်ကစပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ မှေးမိန်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ ဟားဗတ် နုိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခ ဆင်မြူရယ်ဟန်တ်ိန်တန်က Clash of Civilization ကို ဖော်ပြသွား ခဲ့ပေမယ့် 9/11 နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အချို့က Dialogue among Civilization ဆိုတဲ့အယူအဆကို ဖော်ထုတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားလာကြတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုချင်း တွန်းတိုက်မှုကနေဖြစ်လာမယ့် ပဋိပက္ခကို ယဉ်ကျေးမှုချင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာ ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုတွေ့ဆုံလာတဲ့အခါ Cultural tolerance ကအရေးပါလာပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ ၁၉၉၅ နိုဝင်ဘာ ကြေငြာစာတမ်းအရ tolerance ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို အတိုချုပ်ပြောရရင် ကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု တွေအပေါ် လေးစားမှု၊ လက်ခံပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းတဲ့တာဝန် တရပ်ဖြစ်ပြီး ကွဲပြားမှုတွေ ကြားထဲက ညီညွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ တဦးချင်းစီသာမက အသင်းအဖွဲ့လိုက်နှင့် အစိုးရ အတိုင်းအတာအထိကျင့်သုံးမှသာ အပြန်အလှန်နားလည်မှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။
Tolerance မရှိပါက စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးမရှိနိုင်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးမပါတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီဟာလည်း ရေရှည်တည်တံဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါကြောင့် UNESCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘာသာစကား၊ဓလေ့ထုံးစံ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မတူတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် tolerance မထားပဲ စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းရေးကို သာလုပ်ဆောင်နေမယ် ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးကြီးဝါဒကိုသာ ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အနိဋ္ဌရုပ်တွေအပြင် နောက်ဆက်တွဲ မုန်းတီးမှုတွေကိုသာ ဖန်တီးပေးနိုင်တာမို့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဘယ်လိုရနိုင်ပါ့မလဲ။
Posted by Witmone at 1:59 PM
အီးမေးလ် ။ ။ ngunjawa2011@gmail.com
POPULAR POSTS OF THE WEEK
HTAWT SHUT N-MAI SAI LAGAW LAHKAM NI - (DAW - 1)
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဘာကြောင့် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲ - အပိုင်း (၅)
မြန်မာစစ်တပ် သြဇာကြီးမားနေကြောင်း အမေရိကန်စစ်သံမှုးဟောင်း၏ ဆောင်းပါး
JAWNG SARA, AMYU A NINGBAW, MARAN BRANG SENG
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အတွေးစများ - ဂါမဏိ
Why Western oil companies love Myanmar's Moe Myint
ဖက်ဆစ်တပ်များ ၈၁ မမ မော်တာ အမြောက်များဖြင့်ပစ်ခတ်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘင်္ဂါလီအရေးခင်းကြောင့် အမျိုးသားရေးဝါဒကြောင့် ညီညွတ်မှုအခွင့်အရေး ရရှိလာခြင်း
ကေအိုင်အို အခြေခံဥပဒေ ဖြည့်စွက်အကြံပြုတင်ပြချက် (၁၉) ချက် (ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံ)
INT'l COMMENTARY (23)
LAIKA NGAU (20)
BUM CHYANGAU (15)
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေ (5)
DR KHA LUM (3)
PANG LONG (3)
DARU MAGAM TARA 48 (2)
JA MARAN (2)
KACHIN RELATED LINKS
Laiza FM Radio
Kachin News Group
မြန်မာ၊ကချင် Reliability & TRUST
Kachin Bible iPhone
Kachin Songs ( Oh..Civil Waf Life)
WHEN WILL IT BE?
KIO LEADERSHIPS NOW & THEN
THIS IS OUR LAND!!!
SIEGE OF KACHIN STATE
DVB - JULY 3, '11 NAY ZAW NAING
N Hpan Ja Ra interiew (Kachin )
N-GUN JA WA 2013. Powered by Blogger.